galmudugnews.com » Odayaasha magalada Hobyo oo u istaagay xalinta dagaladii shalay. Home About
Home » WARARKA » Odayaasha magalada Hobyo oo u istaagay xalinta dagaladii shalay. Odayaasha magalada Hobyo oo u istaagay xalinta dagaladii shalay. galmudug on
No Comment Views 16347Iyadoo shalay galinkii dambe ilaa xalay uu dagaal ka dhacay degaanka gawaan ee hoos taga dagmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa saaka waxaa ku baxay kooxahaasi dagalamay Odoyaal iyo wax garad ka soo jeeda degmada Hobyo ku waasi oo isku xilsaaray in ay soo af jaraan colaada u dhaxeysa Ciidanka General Qaybdiid Iyo Taliyaha Ilaalada Badda Galmudug.
Max’ed Axmed sahal oo ka mid ah odoyaasha saaka ka shaqeynaayay sidi loo dhax gali lahaa kooxahii dagaalamay ayaa idaacada kulmiye u sheegay in ay odoyaal ay iska soo xuleen u direyn goobta uu shalay dagaalka ka dhacay balse ilaa iyo hada aysan jirin wax xal ah oo ay isla gareen sida ugu dhaqsiyaha badan ay uxalaindoonan qilaafka ka jira halkaasi ayuu hadalkiisa intaa kudaray Maxamed Axmad Sahal oo ka mid ah odayasha magaalada Hobyo.
Shalayay ayay aheyd markii uu dagaal dhax maray Ilaada Gaarka ah Ee C/Qaybdiid Iyo Taliyaha Ciidanka Ilaalada Badda Galmudug uu Halkaasi Ku dhexmaray dagaal dhaliyay qasaaro soo kala gaaray Labada Dhinac ee dagalantay oo inta la og yahay ay dhimashada guud ay mareyso ilaa 2 halka dhaawacana uu kor u dhaafay 10 ruux.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21140 hitsContact US - 19977 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19392 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16359 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16179 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14870 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14330 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14301 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14004 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13778 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12856 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12634 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12585 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12304 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12062 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11957 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11681 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11583 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11577 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11573 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11450 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11294 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11253 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11242 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11011 hits Home About